DEG DEG:- Qarax qasaare geystay oo goordhaw ka dhacay degmada Dharkeenley ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Qarax qasaare geystay oo goordhaw ka dhacay degmada Dharkeenley ee Muqdisho
Qarax miino oo lagu soo xiray gaari uu watay nin la sheegay inuu ka mid ahaa macalimiinta ka howlgala dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa goordhaw ka dhacay degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir.
Qaraxaan oo si weyn looga maqlay qeybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in lagu beegsaday nin magaciisa lagu soo koobay Macalin Aadan Goomey, xilli uu maraayay inta u dhaxeeysa xaafadda Dabakaayo Madoow iyo Dabakaayo Cagaar, gaar ahaan nawaaxiga Isbitaal Macaani ee degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho.
Ninkaasi qaraxa lagu dilay ayaa sida la sheegay ka shaqeyn jiray dugsiga H/Dhexe iyo Sare ee Halgan oo ku yaala degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho, iyadoona illaa iyo haatan aan la ogeyn sababta qaraxaasi loogu xiray gaarigiisa.
Sidoo kale, waxaa la sheegayaa in qaraxaasi ay ku dhaawacantay labo qof kale oo mid ka mid ah uu gaariga saarnaa, halka ruuxa kalena ee dhaawacmayna ay ahayd gabar mareeysay agagaarka goobta uu gaariga ku qarxay.
Xaaladda goobta ayaa haatan ah mid aad u kacsan, waxaana halkaasi islamarkiiba soo gaaray ciidamo ka tirsan nabad-sugidda qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya, oo durbadiiba bilaabay baaritaano ay ku ogaanayaan sida ay wax u dhaceen.